VAMPIRE BATTA, CAD, MIRO, DOOFAARKA, BULLDOG IYO FAWAAKIH KALE - BEER CAGAARAN
Noocyada fawaakihda: vampire, cad, miro, piggy, bulldog iyo kuwo kale
Fiidmeeradu waa naas-nuujinta kaliya dabiiciga ayaa duuli kara.
Waxay ku noolyihiin dhammaan soonaha cimilada, marka laga reebo goobaha buuraha iyo buuraha sare. Xayawaankii ugu horreeyay ee noocyada noocaan ah ayaa dunida ka muuqday in ka badan 50 milyan oo sano ka hor.
Known in ka badan 700 nooc oo fawaare ah, intooda badani waa cayayaanka.
Foolaha faa'iido leh beeraha, sababtoo ah waxay u horseedaan nolol habeenkii, burburinta cayayaanka marka ay ku dhowaadaan dhammaan shimbiraha.
Waa maxay foori?
Koofiyadu waxay ka mid yihiin amarrada faraha. Taas macnaheedu waa labadaba lugaha hore waxay u jeesteen baalal weyn, iyo faraha dheeraadka ah waxay u adeegaan sidii qaab ahaan loogu talagalay.
Qaab dhismeedka noocan oo kale ahi uma oggola inay u daboolaan sida shimbiraha, iyaga oo ku qasbaya inay si joogta ah u xiraan baalashooda.
Xawaaraha duulimaadka ee fiidmeeradu way kala duwanaan kartaa 15 km / h oo leh dhaqdhaqaaq fudud, ilaa 60 km / h markaad qaaddo cayayaanka.
Muuqaal kale oo ka mid ah xayawaankani waa habka dhulka. Muddo gaaban, budhadhku waxay u baahanyihiin in ay dhaqdhaqaaqaan oo ay ku fariistaan ​​dusha sare ee wareegooda. Buuryo ay iyagu ma abuuraan.
Caawin! Waxay ku quudiyaan digaagga, cayayaanka kala duwan ee ku habboon hawada. Caadi ahaan hal xayawaan ayaa saacad kasta qaadi kara ilaa 200 kaneeco.
Waxaad u fiirsan kartaa fiidmeerta sawirada leh magacyada noocyada.
Sawirka cad ee sawirka:
Faarfiidka dhirta miraha:
Sawirka Piggy ee sawirka:
Booska dheer ee dhagta:
Baalasha vampire sawiray:
Whitetail ama Honduras cad cad mid ka mid ah wakiillada ugu yar qoysaska. Marka laga soo tago Honduras, wuxuu ku nool yahay Bartamaha Ameerika - Nicaragua, Costa Rica, Panama.
Body - illaa 4.5 cm dheerDheguhu waa yar yahay, sanka waa qaab aan caadi ahayn. Iyadoo loo marayo, xayawaanku waxay soo saaraan dib-u-soo-noolaansho - qaabkani waxa uu suurta galinayaa in uu diiradda saaro ama kordhiyo calaamadaha la diray.
Waxay ku nool yihiin xaashiyo waaweyn oo helikonium ah, godadka geela ee iyaga ku jira, si ay u dhammaato, iskudubaraan, u sameeyaan teendho. Cun cun cun.
Sida caadiga ah hal xaako ayaa ku nool qoysaska fiidmeerada 5-6 qof, laakiin mararka qaarkood waxaa jira qoysas badan oo ku nool qabiil weyn. Dumarku waxay dhalaan hal sano oo sannadkii.
Boobka doofaarka ama jiirka boodbee waxaa la helay 1973-dii. Boobka ayaa magaceeda labaad helay sababtoo ah baaxaddiisa - jirka aan ka dheereyn 3.3 cm, iyo miisaanka - ilaa 2 garaam. Tani waa batoorka ugu yar.
Intaa waxaa dheer, wajiga waa dabeecad sanka. Dhegaha waa weyn, laakiin doofaarka, oo ka duwan noocyada xayawaanka kale ee qoyska, ma leedahay doofaarka.
Ugu weyn gobolka of habitat - Thailand iyo qaar ka mid ah dalalka deriska ah. Wuxuu ku nool yahay godad dhagaxan, si uu u ugaadhsado duqsiyo kooxo 4-5 xayawaan ah.
Ha ka dhaqaaqin goobta guriyeynta in ka badan 1 km. Cayayaanka ayaa raadinaya qoorta bambo ama qoryaha qiiqa. Ma jiro xog sax ah oo ku saabsan dhalmo, oo ay u badan tahay in hal sano oo dheddig ah uu keeno kubir.
Vespers - mid ka mid ah faraska weyn ee faras, oo ay ku jiraan 8 nooc iyo 13 subspecies. Waxay ku nool yihiin Yurub iyo Waqooyiga Afrika, halkaa waa nafta ugu weyn ee naasaha laga soo bilaabo noocooda.
Dhererka jirka - laga bilaabo 10 ilaa 50 cm. Waxay inta badan ku nooshahay keynta qallafsan, ma degto meelo khiyaano leh.
Huntada at qorraxda iyo waaberiga, doorashooyin doorasho iyo dhicin. Xisbiyada ugu wayni waa kuwo waaweyn, waxay cuni karaan dhagax yar yar.
Caawin! Waxay yihiin waraaqaha ugu dhaqsaha badan - waxay gaari karaan xawaare ilaa 60 km / h, oo kor u qaada ilaa 100 mitir.
Dareenka barafka, sababta oo ah bilawga cimilada qaboobaha waxay u haajiraan meelo fog ilaa 1000 km. Dumarku waxay keenaan hal ama laba, dhif ah saddex jibbaar.
Eeyga iyo dawacada
Eeyaha orodka ama dawacooyinka duulaya, fardaha miraha - waa magac caadi ah noocyada xayawaanka oo dhan, kan cantooban.
Xaqiiqdii, ma aha fowdo kuwaas oo ah cayayaanka, laakiin waxay kudhow yihiin qaab-dhismeedkooda iyo horumarintooda macdanta geedaha.
Farqiga ugu weyn ee ka dhexeeya midba midka kale - cuntada la cuno, qaab-dhismeedka garabka, isticmaalka qaabka jiirarka ee jiirarka iyo aragga ee kaniisada.
Xayawaankaas aan laga helin RuushkaHoygooda ugu weyn waa Roobabka Asia ee Vietnam, Filibiin, Malaysia, Laos iyo wadamo kale.
Magaca "eeyaha duulaya" waxay heleen sababtoo ah xajmiga sifududka dabiiciga ah. Baalasha qaangaarka ayaa leh cabbirro waaweyn - jirka ilaa 42 cm, baalasha ilaa 1.7 mitir. Miisaanka ilaa 900 garaam.
Waxay ku nool yihiin deegaanno ballaadhan, iyagoo degaya geedaha. Cun cunnada kulaylaha, gaar ahaan muuska, papayas, qumbaha, canab iyo kuwa kale.
Sababtoo ah dhadhanka dhadhanka ee krylan, waxaa lagu magacaabaa "jiirka miro". Miraha ma cunaan, laakiin kaliya nuugida juuska iyo saxarka ka soo baxa.
MUHIIM! Goobta xayawaanku waxay waxyeello weyn u geysan kartaa beertu iyaga oo "xayeysiinaya" miraha geedaha oo idil.
Xayawaanka jiifka ah ayaa hoos u dhacaya. Badanaa waxaad arki kartaa sawir marka habeenkii qaboobo mid baaldi loo isticmaalo sida buste, ku duubaya jirka oo idil, iyo kulaylka - bedelka taageeraha.
Dumarku waxay leeyihiin hal dhir sannad kasta.
Fiidmeerada cirridka leh - qoys ballaaran oo ay ka mid yihiin in ka badan 318 nooc.
Magaca ayaa helay sababtoo ah xaqiiqda ah in aysan haysan wax muuqaal ah, gorgortanka oo aan lahayn nidaamyo gawaarida leh.
Qoyska ka mid ah derbiyada saafiga ah ayaa ah maqaarka, fawaakihda, ballgoyska, boobka dheer iyo kuwo kale oo badan.
Ku noolow adduunkahalkaas oo uu jiro daaqsinka qorraxda. In Russia, waxaa jira 37 nooc oo jiiraha sida.
Waxqabadka waxaa lagu muujiyaa habeenkii ama habeenkii ugaadhsiga cayayaanka kala duwan. Noocyada kala duwan ee nalalka habeennimada cun kalluunka.
Xilliga qaboobaha, uurjiifku wuxuu dhacaa, laakiin qaar (sida gabdhaha fiidka) waxay u duulaan meelo kulul. Dumarka xilliga dhalmada waxay dhalaan hal mar 1-2, wax ka yar 3-4 qof.
Ushans - nooc ka mid ah boobka leh dhegaha waaweynloo isticmaalo qorista. Xayawaanka jiifka ah, waxay ku dhuumanayaan hoostooda baalasha.
Baalasha gaaban ee gaaban, laakiin xayawaankani waxay noqon karaan kuwo daba-gala oo xitaa si kooban u kiciya hawada si ay ugaarsadaan cayayaanka. Dhererka jirka - 5-6 cm.
Qeybo ka mid ah qaaradda oo dhan laga soo galo Atlantic ilaa Pacific, waqooyiga Aasiya, waqooyiga Afrika.
Waxay ku quudiyaan kaneecada, aboorada, kuwa lamid ah, iyo wixii la mid ah. cayayaanka. Dumarku waxay dhalaan hal mar, marar dhif ah laba dabe sannadkii.
Kabaha ama roodhida yar-yar ayaa ah noocyo kala duwan oo jilicsan.
Caawin! Farqiga ugu weyn ee ka imanaya dhammaan xayawaanka noocan oo kale ah waa duulimaad aad u dambeeya ugaadhsiga, ka dib bilawga mugdiga oo dhan. Xaaladdan oo kale, duulimaadka laftiisa ayaa si tartiib ah u degan.
Dhererka jirka - 3.5-8.5 cm. Ma caan aduunka oo dhanmarka laga reebo aagagga arctic.
Guud ahaan, waxay yihiin noocyada kaliya ee ku habboon noloshii oo dhan gebi ahaanba xaalad dabiici ah, xitaa masiibo u ah fawaakih kale. Dalka Ruushka, waxaa jira ilaa 19 nooc.
Quudinta cayayaanka habeenkii. Dumarka inta lagu jiro sanadka ayaa keena hal, marar dhif ah laba jibbaar.
Podkovonosy - nooca fawf, kuwaas oo loo magacaabay sababtoo ah kiniiniga xajmiga ah ee ku wareegsan sankaoo u eg sida fardo cadcad.
Qaab dhismeedka noocan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah cod-bixinta, calaamadaha kuwaas oo ay ka soo baxaan duufaanka. Ma caan ee bartamaha bari, wuxuu ku nool yahay Ruush kaliya oo ku yaal Caucasus.
Cunista cayayaankaugudbinta on duun. Wakhti u daa in ay kudhowaan meeshaas.
Hawlgalku wuxuu qaadanayaa qiyaastii nus saac ka dib qorrax dhaca, oo tusi waxqabadka qaybta hore ee habeenka. Dumarku waxay dhalaan hal dhallinyaro kaliya sanadka dhexdiisa.
Bulldog Bulldog waa qoys ka kala duwan qabiillo kale oo kale. Baalasha horumarineed oo dheeraad ah - waa cidhiidhi, dheer iyo calaamad.
Sababtoo ah, inta jeer ee uu ku dhaco istarooggu aad ayuu uga sareeyaa jiirka kale. Dhererka jirka jirka - 4-14.5 cm. Ku noolaanshaha goobaha kuleylka ah labadaba.
Waxay ka sameysan karaan kooxo dhowr ah tobanaan malyan oo qof. Dheecaan duulaya, calaamado muujinaya xoogga aad u sarreeya.
Noocyada qaarkood waxay keeni karaan 3 litters sanadkiiba, oo ka kooban hal dhir mar kasta.
MUHIIM! Waxay khatar ugu yihiin dadka iyo xayawaanka guryaha, maxaa yeelay inta lagu jiro qaniinyada waxay ku gudbin karaan rabshadaha iyo cudurrada kala duwan ee faafa.
Fiidmeerka Vampire waa qoys dhan oo wakiiladooda waa dulin.
Waxay cunaan kaliya dhiig cusub xayawaanka kale ama shimbiraha ayaa mararka qaar weerara ku saabsan dadka hurda.
Hoosudhaca ayaa si liidata loo horumariyaa; inta lagu guda jiro ugaarsiga waxay ku tiirsan yihiin wax badan dhegeysi wacan iyo dib-u-qaadeyaasha casriga ah. Iyada oo kaalmada dambe, meelaha ugu yar ee la ilaaliyo maqaarka ayaa la go'aamiyaa.
Waxay ku nool yihiin Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika.
Dunida fowdo waa mid kala duwan. Halkan waxaa ku yaal xayawaan aad u yaryar iyo shakhsiyado leh baalash ka badan 1.5 mitir.
Inta badan koofiyadu waxay quudiyaan cayayaankamarka loo eego manfacyada dadka iyo beeraha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo cuni kara midho, ama xataa weerarka xayawaanka hurda iyo shimbiraha loogu talagalay helitaanka dhiigga.